सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कोभिडविरुद्धको खोप ! « Bagmati Online
सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कोभिडविरुद्धको खोप !
वैज्ञानिकद्वय उगुर सहिन र ओज्लम तुरेसीले आफ्नो जीवन क्यान्सर र सङ्क्रामक रोगको अनुसन्धानात्मक कार्यमा समर्पित गरेका छन् । ‘इम्युनोथेरापी’ पद्धतिबाट क्यान्सरको उपचारमा वर्षौं बिताएका छन् । तर कोरोनाभाइरस महामारीबीच सहिन र तुरेसि जोडीले ‘मोडिफाइड जेनेटिक कोड्स’को क्षेत्रमा गर्नुभएको अभूतपूर्ब अनुसन्धानले विश्वको ध्यान आकृष्ट गराउन सफल हुनुभएको छ । विश्वकै पहिलो प्रभावकारी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अन्वेषण पछाडि यी दुबैजनाको मस्तिष्क हो । ५५ वर्षीय सहिन र ५३ वर्षीया तुरेसिले बायोएनटेकको स्थापना सन् २००८ मा गर्नुभएको हो । मध्य जर्मनीको मैन्ज शहरमा उक्त कम्पनी अवस्थित छ ।
सोमबार कम्पनीको अमेरिकी साझेदार एवम् विशाल औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरले आफ्नो खोपको प्रयोगले परीक्षण गरिएकामध्ये ९० प्रतिशत ब्यक्तिमा प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले यसअघि कहिले प्रयोगको अनुमति नदिइएको मेसेन्जर आरएनए वा एमआरएनए विधिको प्रयोग गरिएको छ । जसले खोप दिइने ब्यक्तिमा प्रतिरक्षा प्रतिक्रियात्मक रुपमा विकसित गर्ने गर्छ । मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सहिनले भन्नुभयो, “मानव समुदायका लागि राम्रो सन्देश के छ भने हामीले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको उन्मूलन खोपमार्फत् गर्न सक्छौं ।” सीएनएनसँगको कुराकानीमा फाइजरका कार्यकारी प्रमुख अल्बर्ट बौर्लाले पछिल्लो एकसय वर्षको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विकास र उपलब्धि भएको दाबी गर्नुभयो ।
गत् मे महिनामा सीएनएनसँगको कुराकानीमा सहिनले निरन्तरको दुई दशकसम्म औषधिविज्ञान क्षेत्रमा काम गर्दा समाजका लागि केही योगदान दिन चाहेको बताउनुभएको थियो । टर्कीको भूमध्य तटको इस्केन्ड्रममा सहिनको जन्म भएको हो । चार वर्षको छँदा उहाँ जर्मनीको कोलोग्ने बसाइ सर्नुभयो । रोयटर्सका अनुसार उहाँका बुवा त्यसताका फोर्ड कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टर्कीका एक जना फिजिसियनकी छोरी तुरेसिलाई भेट्नुभयो । त्यत्तिबेला दुबैजना आफ्नो शैक्षिक जीवनलाई उज्यालो बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो । रोयटर्सका अनुसार सहिन र तुरेसिले क्यान्सर अनुसन्धानमा जुटनुभयो ।
गत् जनवरी महिनामा सहिनले चीनको वुहान शहरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे शोधपत्रमा पढ्नुभएको थियो । सहिनले एन्टी क्यान्सर एमआरएनए औषधिलाई एमआरएनएमा आधारित भाइरल खोपमा परिणत गर्न सानो पाइला चाल्नुभयो । बायोएनटेकले आफ्ना पाँचसय जना कर्मचारीलाई सम्भावित एमआरएनए यौगिक अनुसन्धान गर्ने आयोजनाका लागि अह्रायो । सहिनलाई उहाँका समकक्षीहरुले “भद्र र नम्र” ब्यक्तिको रुपमा उल्लेख गर्छन् । जर्मनीको मैन्ज विश्वविद्यालयमा सहिनका समकक्षी प्राध्यापक मत्तिस थिओबाल्डले उपलब्धि र सफलताका बावजूद उहाँ अत्यन्तै अतुलनीय भद्र ब्यक्ति रहेको बताउनुहुन्छ ।
(सीएनएन र रोयटर्सको रिपोर्टका आधारमा गोरखापत्र दैनिकका लागि इश्वरचन्द्र झाले तयार गरेको सामग्री)